﻿Download I-Microsoft® Office Language Interface Pack 2013 – IsiXhosa from Official Microsoft Download CenterWarning: This site requires the use of scripts, which your browser does not currently allow.See how to enable scriptsDownload CenterMenuSearchSearch Download Center
HausaI-DariIgboIkinyarwandaIsi-AfrikansiIsi-AlbhaniyaIsi-AmharikhiIsi-ArmeniyaIsi-AssameseIsiAyisilendaIsi-Azeri (Latini)IsiBaskhaIsiBengali (Indiya)IsiBhelarusiyaIsiBhengali (Bangladesh)IsiBhosniya (Latini)IsiFarsiIsiFilipinoIsiGalishiyaIsiGujaratiIsiJojiyaIsiKannadaIsiKhatalaniIsiKhmerIsiKonkani IsiKyrgyzIsiMalayalamIsiMaltaIsiMāoriIsiMarathiIsiMasedoniya (saseFYROM)IsiNorwejiyeni (isiNynorsk) saseNorwayIsi-OriyaIsiPediIsiPunjabiIsiQuechua (sasePeru)IsiRashiyaIsiSebhiya (isiSirilikhi)IsiSinhalaIsiTatarIsiTeluguIsiThamiliIsi-Uzbek (iLatini)IsiWelshiIsiWolofIsiXhosaIsiYorubaIsiZuluKiswahiliLëtzebuergeschNepaliPunjabi - Islamic Republic of PakistanScottish Gaelic - United KingdomSetswana (Aforika Borwa)Tajik - TajikistanumAyirishiUyghur - China
languageinterfacepack-x86-xh-za.exe14.6 MB14.6 MB
languageinterfacepack-x64-xh-za.exe15.0 MB15.0 MB
Ushicilelo:2013Igama lefayile: languageinterfacepack-x86-xh-za.exelanguageinterfacepack-x64-xh-za.exeUmhla wopapasho:2013/03/15Isayizi yefayile: 14.6 MB15.0 MB
I-Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - IsiXhosa inikela I-intafeyisi yomSebenzisi yolu setyenziso lulandelayo lwe-Microsoft Office 2013:
Ngokusebenzisa i-Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - IsiXhosa, abasebenzisi bangasebenza kuhlelo lolwimi lofakelo lokuqala oluxhaswayo losetyenziso lwe-Office baze babone imiyalelo nokhetho lolo setyenziso - IsiXhosa. Ebudeni bokufakelwa kwe-Microsoft Office Language Interface Pack 2013, iifayile ezenza bakwazi abasebenzisi ukuba batshintshe ulwimi lweintafeyisi yomsebenzisi bakopelwa kwidiski eqinileyo yendawo. Emva kofakelo, amandla nokhetho lonxibelewano lwe-Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - IsiXhosa luyafumaneka ngaphakathi kusetyenziso lwe-Office 2013 nosetyenziso lwe-Microsoft Office 2013 Language Settings. IiMfuno zeSistimIiSistim zokuSebenza eziXhaswayo:
I-Microsoft Windows 7 - 32 okanye i-64 bit OS
I-Microsoft Windows 8 - 32 okanye i-64 bit OS Qaphela: Sicela uqinisekise ukuba ufakela i-Service Packs zakutshanje zeNkqubo yokuSebenza ukuqinisekisa inkxaso yolwimi lwakho.
Isoftwe Naluphi na uhlelo lwe-Office 2013 suite okanye ezimeleyo oluqulethe i-Microsoft Excel, i-Microsoft OneNote, i-Microsoft Outlook, i-Microsoft PowerPoint okanye i-Microsoft Word okanye iza kuxhasa i-Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - IsiXhosa. Qaphela: Sicela uqinisekise ngokufakela i-Microsoft Office Service Packs yakutshanje yeemveliso zakho ze-Microsoft Office. Oku kuya kuqinisekisa amava angcono omsebenzisi.
Ikhompyutha neProsesa Iprosesa ye-1 GHz kunye nenkxaso ye-SSE2 okanye engaphezulu; i-2 GB RAM okanye ngaphezulu
Isithuba sediski Ukongezelela kwisithuba sediski eqinileyo esetyenziswa lusetyenziso olufakelweyo lwe-Office 2013,
3 GB yesithuba sediski eqinileyo esifumanekayo.
Zonke ezinye iimfuneko zenkqubo ziyafana nezo zosetyenziso lwe-Office 2013 ozisebenzisayo kunye ne-Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - IsiXhosa.
I-Windows Language Interface Pack Kucetyiswa ukufakelwa i-Windows 7 yakutshanje okanye i-Windows 8 Language Interface Packs ngenkxaso yolwimi yeNkqubo yokuSebenza nosetyenziso lwesoftwe.
Isisombululo seMonitha neesetingi ze-DPI Iifonti ezininzi ziyilelwe ukufundwa ngokungcono kwisisombululo esingu-1366. Ukuba ufumana ubunzima ekufundeni iifonti zolwimi lwakho nceda hlaziya zokubonisa kwesi sisombululo okanye engaphezulu kuyimfuneko. Sicela uqaphele: sicebisa ukuba usebenzise usetyenziso lwe-Office 2013 kwisetingi yesiseko se-DPI yese-Windows - 96 DPI. Ukusebenzisa isetingi ye-120 DPI kusenokubangela amava omsebenzisi angekho mahle kolunye usetyenziso lwese-Office ngokwandisa isayizi yedayalogu ye-Office.
Ukhetho lweNgingqi noLwimi Ukongezelela kucetyiswa ukuba zonke Ukhetho lweNgingqi noLwimi kwi Iphaneli yoLawulo zisetelwe ulwimi lwe-Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - IsiXhosa.
Ukuze ufakele olu khuphelo:
Khuphela I-LanguageInterfacePack.exe fayila ngokucofa iqhosha elithi Khuphela (ngaphezulu) yaye nokugcina ifayile kwidiski yakho eqinileyo.
Cofa kabini I-LanguageInterfacePack.exe ifayile yeprogram kwidiski yakho eqinileyo ukuze uqalise iprogram yoSeto
Landela imiyalelo kwiskrini ukuze ugqibezele ufakelo.
Xa ifakelwe ifayile ye-readme ye-Microsoft Office 2013 Language Interface Pack ingafumaneka kwi-C:\_Program Files\_Common Files\_microsoft shared\_OFFICE15\_1076\_LIPread.htm.
Ukuhlaziywa kwe-Office 2010 kunye ne-Office 2010 Language Interface Pack okanye uhlelo lwangaphambili lwe-Office 2013 kunye ne-Office 2013 Language Interface Pack ayixhaswa. Ukuba ufuna ukuphucula ufakelo lwesiseko sakho lwe-Office 2010 ukuya kwi-Office 2013 kunye ne-Office 2013 Language Interface Pack ufanele:
Khupha ufakelo lwe-Office 2010 Language Interface Pack.
Sebenzisa useto lwe-Office 2013 uze ukhethe ukhetho lokuphucula.
Xa useto lwe-Office 2013 lugqityiwe, fakela uze ulungelelanise i-Office 2013 Language Interface Pack.
Ukuvuselela imveliso yakho ye-Office:
Ukuba ufumana ubunzima nokufunda Ikhowudi yoFakelo iyonke idayalogu ye-"Microsoft Office Activation Wizard", okanye ikhowudi yafakelo iyonke ayibonakali kakuhle xa usebenzisa i-Microsoft Office Language Interface Pack 2013 yakho, sicela urhoxise iwizadi uze utshinshele ulweimi olusisiseko kwimveliso ukuze uvuselele imveliso yakho ye-Microsoft Office.
Ukuze utshintshise I-intafeyisi yoMsebenzisi kulwimi lwe-Microsoft Office Language Interface Pack 2013 – IsiXhosa, landela la manyathelo:
Lontsha I-Microsoft Office 2013 Language Preferences ukusuka kwi Qalisa\_Zonke iiProgram\_I-Microsoft Office\_I-Microsoft Office Tools imenyu.
Ngaphantsi koKhetha iiLwimi zokuBonisa noNcedo, ngaphantsi koLwimi lokuBonisa khetha ulwimi olufunekayo uze ucofe iqhosha lokuSeta njengeSiseko.
Ngaphantsi Khetha iiLwimi zokuHlela, khetha ulwimi olufunekayo uze ucofe Seta njengeSiseko iqhosha.
Cofa iqhosha elithi Kulungile
Iisetingi zolwimi ozikhethileyo ziza kusebenza kwixa elizayo uqalisa usetyenziso lwakho lwe-Office.
Qaphela: Uncedo alukwazi ukutshintshelwa kulwimi lwe-Microsoft Office Language Interface Pack 2013 – IsiXhosa. Uncedo luya kusoloko lukulwimi lokufakela lwakho lokuqala.Soloko useta uncedo lokubonsa kuluhlu lokwehlela ezantsi kulwimi lwesiseko.
Ukuze ushenxise olu khuphelo:
Yeka zobke iiprogram ze-Microsoft Office.
Cofa kabini Iiprogram neeFitsha iayikhoni kwi-Windows Iphaneli yoLawulo.
Kukhetho lokuKhulula ufakelo okanye ukuTshintsha iProgram, cofa I-Microsoft Office Language Interface Pack 2013 – IsiXhosa kwibhokisi yeeProgram ezifakelweyo ngoku, emva koko ukhethe ukhetho lokuKhulula ufakelo